Xukuumadda Maali Oo walaac ka muujisay qorshaha ciidamada Faransiiska uga baxayaan wadankaas. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
Xukuumadda Maali Oo walaac ka muujisay qorshaha ciidamada Faransiiska uga baxayaan wadankaas.
Last updated Sep 26, 2021 161 0
Markii ugu horeysay xukuumadda ka jirta dalka Maali ayaa muujisay sida ay uga walaacsantahay tallaabada ay dowladda Faransiiska ku shaacisay iney ciidankeeda kala baxeyso dalka Maali, soona afjareyso howlgalka ay ka wado wadankaas,
Ra’iisul wasaaraha Maali Shogol Mayga ayaa shaaca ka qaaday inuu aad uga xunyahay tallaabada halka dhinac ka socota ee ay dowladda Faransiiska ku go’aansatay in ciidankeeda ay kala baxdo dalka Maali.
Isagoo ka hadlayay fadhiga Qaramada Midoobay ayuu ku sheegay Shogol in Faransiisku aanu go’aankan ku wargelin Qaramad Midoobay iyo xitaa xukuumadda dalka Maali.
Wuxuu sheegay in dowladiisa ay raadineyso xulafo kale oo buuxiya firaaqa uu keeni doono marka ciidamada Faransiisku isaga baxaan dalka Maali, waxaana arinkaas loo fahmey in xukuumadda Maali ay heshiis la gashey kooxda Fangar ah oo malleeshiyaad calooshood u shaqeystayaal ah oo hoostaga dowladda Ruushka.
Faransiiska ayaa qorsheynaya in dhamaadka sanadkan uu ciidamadiisa kala baxo dalka Mali, taasoo qeyb ka ah go’aan uu horey u qaatay Emmanual Macron, madaxweynaha dalka Faransiiska ee aflagaadeeya Rasuulka Salla-llaahu Caleyhi wasallam, taasoo uu ku sheegay inuu isbedel ku sameyn doono ciidankiisa jooga wadanka Maali.